Booqo Hultsfred | Hultsfred gudaheeda waxaa ku yaal qolka nolosha!
Halkan waxaa ku yaal meel loogu talagalay nolosha
Hel talooyin ku saabsan tacaburka iyo waayo -aragnimada
Soo hel Hultsfred iyo Vimmerby 22 Maajo
Ducks The - geesiyaashayada dahabiga ah!
Wareegga farshaxanka 28-30 Oktoobar
Farshaxanka dhabta ah ee Stinsen - farshaxanka iyo farshaxanka 🧵 🪡
Ha ka maqnaan wax ka socda degmada Hultsfred.
Makhaayada Lönnebergaboa	Kyrkvägen 2, Lönneberga
17-ka May 14-da galabnimo - 16: 00	 noq
17-ka May 18-da galabnimo - 19: 00
LGBTQI waagaas iyo hadda
LGBTQI waagaas iyo hadda Muxaadaro uu la leeyahay Edward Summanen Edward Summanen, oo ah qoraaga buugga "Queera times - LGBTQI waagii iyo hadda" wuxuu muxaadaradan ku siinayaa horudhac casri ah.
17-ka May 19-da galabnimo - 20: 30
HADDII Hebe - Överums IK
Matxaf xiiso leh, nashaadaadyo saaxiibtinimo qoys, aragti xiiso leh iyo dabeecad fantastik ah. Soo hel Hultsfred oo dhan!
Fornborg ee Blaxhult
Blaxhult waxaa ku yaal qalcad qadiimi ah oo ka timi xilligii birta iyo buurta ka hooseysa buurta waxaa ku yaal afar tuulmooyin aasid ah, oo kan ugu weyn uu ka yimid Neolithic. Qabuuraha midkood
Xadiiqadda Elk park
Moose, bakaylaha, riyaha iyo digaagga ayaa ku nool Målilla Älgpark.Si suurtagal looga dhigo in la dareemo mooska oo dhow, waxaa mar jira xayndaab
Hoolka dabaasha iyo hoolka isboortiga
Hoolka dabbaasha iyo hoolka isboortiga wuxuu bixiyaa dabbaal, jimicsi, duugis ama saaxiibbadaa la sheekaysiga iyo kafeega. Xaruntu waxay ku dhowdahay dabiicadda oo leh dariiqyo jimicsi oo fiican.
Emilleden waxaa ugu wanaagsan in laga bilaabo Lönneberga hembygdsgård ama Mariannelunds iyo Hessleby hemgårdsgård, halkaasoo ay ku yaalliin fursado badan oo baarkinka. Mar labaad ayaad dooraneysaa
Muuqaallo & waxqabadyo
La yaab bay'ada taariikheed, farshaxanka & farsamada gacanta, duurjoogta, dabeecadda quruxda badan iyo qaar kaloo badan. Waxaa jira waxqabadyo iyo soojiidasho badan, kuwaas oo badankoodu furan yihiin sannadka oo dhan!
Magaalada Järnforsen, waxaa ku yaalo shabakad socod dheer oo tamashle ah, dhammaantoodna waxay ka bilaabmayaan meel ka baxsan bulshada. Bilowga waxaa jira goob hilib lagu dubto,
Wershedda dabaysha ee Dalsebo si wanaagsan ayaa loo soo celiyey waxaana hadda ku yaal madxaf. Tuulada Dalsebo waxay ku taal dhul muuqaal ah oo leh beero iyo nidaamyo wadooyin oo ay iskaga mid yihiin
🖼️ Matxafyada & bandhigyada, 🎺 Muusiga
Dhamaan indhaha & waxqabadyada
Eeg dhammaan meelaha lagu maydho
Eeg dhammaan waddooyinka socodka
Eeg dhammaan garoomada & xeryaha dabiiciga
Eeg dhammaan guryaha guryaha ku yaal
Casho kafiican oo loo dabaaldego, qadada magaalada ama fiid wanaagsan oo lala yeesho asxaabta. Waxaa jira wax loogu talagalay dhammaan dhadhanka iyo munaasabadaha.
🏨 Hotel, 🎺 Muusiga, Makhaayadaha
Wax macno ah ma leh haddii aad leedahay himilooyinkaaga dhammaadka jaceylka, fasax qoys ama shir - waxaa jira qaabab hoy ah oo ku habboon munaasabad kasta.
🏨 Hotel, Makhaayadaha
Soo hel Hultsfred iyo Vimmerby 22 Maajo Ducks The - geesiyaashayada dahabiga ah! Wareegga farshaxanka 28-30 Oktoobar Farshaxanka dhabta ah ee Stinsen - farshaxanka iyo farshaxanka 🧵 🪡
Soo hel Hultsfred iyo Vimmerby 22 Maajo Ducks The - geesiyaashayada dahabiga ah! Wareegga farshaxanka 28-30 Oktoobar Farshaxanka dhabta ah ee Stinsen - farshaxanka iyo farshaxanka 🧵 🪡 Khibrad u yeelo Madxafka Warshadaha Alaabta Virserum